संस्मरण : आत्मस्वीकृति: नयाँ अध्यायको - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : लाटो पहाड
कविता : शाहजहाँको इच्छा →
यो आत्मस्वीकृति वर्तमान नेपालको अनुहारसँग जोडिएको छ । सज्जन मानिसका मनमा समेत गुनासाहरू थान्को लागेर बसेका छन् । र, ती सबै राजनीतिसँग जोडिएका छन् । किनभने, राजनीति, समाजको यस्तो तत्त्व हो, जसलाई न माया गरेर पाल्न सकिन्छ, न घृणा गरेर फाल्न सकिन्छ । गजलकार भाइ धनराज गिरीले भनेको एउटा भनाइ यतिबेला मलाई सम्झिन मन लागको छ । उनी भन्छन्, “राजनीति समाप्त भएपछि आत्मीयता आरम्भ हुन्छ ।” तर, वास्तविक जीवनमा कहिल्यै राजनीति समाप्त हुँदैन । नेता नभए पनि बुढ्यौलीतिर लागेको मानिस पार्टीको सल्लाहकार हुन्छ ।
दोस्रो अपरेसन थियो एपिन्डिक्सको । आफैँ गाडी चलाउँदै गएको थिएँ कार्यालय । पेटचाहिँ असाध्यै दुखिरहेको थियो । विद्या भण्डारीले ‘तपाईंको अनुहार किन यति कालो’ भनेर सोधेपछि मेरो दुखाइ झन् चर्किएको अनुभूत गरेँ र बाहिर राखेको गाडी टिपेर घरतिर लागेँ । घर आएपछि श्रीमती झुमा देवान र भानिज सुरेशलाई लिएर मोडेल अस्पतालतिर लागेँ । विद्याले फोन गरसिक्नुभएको रहेछ । ढोकैमा भेटिनुभयो, डाक्टरद्वय भरत प्रधान र सरोज धिताल । ‘खानापुरी पछि गर्दै गरौँला’ भनेर मलाई तान्दै उहाँहरू अपरेसन रुमतिर लाग्नुभयो ।
जुन रात मेरो एपिन्डिक्स फ्यालियो, त्यही रात पार्टी फुटेछ । बिहानै मलाई पोस्टअपबाट वार्डमा सारियो । मलाई झार्दा नझार्दै आएका अछामतिरका एक जना साथीले ‘आज दिउँसो औपचारकि रूपमा नयाँ पार्टी दर्ता हुँदै छ, त्यसैले अहिले नै स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिन आएको’ भनेपछि रातीको दुखाइ बल्झिएर आएको थियो । अर्को दिन पार्टी विभाजनका विरुद्ध लड्न घर पनि नआई सीधै बल्खुको पार्टी कार्यालय गएको थिएँ ।
मेरो टाउकामा के रोग लागेको थियो, अहिले पनि म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । डाक्टर राम घिमिरेले टाउकामा गम्भीर समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । मेरो मनको चिन्ता घटाउन होला, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले टाउकामा पिनास भरिएछ भनेर मेरो मनलाई रमाइलो बनाइदिनुभयो । त्यसैले टाउको फुटाउँदा पनि मलाई डर लागेको थिएन । नर्भिक अस्पतालमा भएको थियो, मेरो टाउकाको अपरेसन । अस्पतालमै हल्ला सुनेँ । मलाई त ब्रेन क्यान्सर भएछ! तर, पत्याइनँ मैले, चिकित्सकहरूको उज्यालो अनुहार देखिरहेको हुनाले । अपरेसन सकिएपछि, केमोथेरापी र रेडिएसनका लागि दिल्ली पठाउनुभयो, डाक्टर देवकोटाले । दिल्लीको एम्समा म देवकोटाको सिफारसिपत्र लिएरै गएँ । त्यहाँ डाक्टरद्वय महापात्र र पीके झुल्काले ‘यो अपरेसन नगरेको भए पनि हुने थियो’ भनेर मेरो मनलाई झन् हल्का बनाइदिएका थिए । टाउकाले पैसाचाहिँ कुस्तै खर्च गरायो । बाचुन्जेल गाली सुन्नुपर्ने गरी राज्यले एकतिहाइ सहयोग गर्‍यो । बाँकी दुईतिहाइ साथीहरूको सहयोग र ऋणपान गरेर खर्च टारियो । ०५८ सालमा लिएको ऋण ०६७ सालमा तिरेर सकिएछ । १० वर्षपछि डाक्टर रामले भन्नुभयो, “अब एमआरआई गर्नुपर्दैन, तपाइर्ं पूर्णरूपमा चंगा हुनुभयो ।”
म आफ्नो बिमारीलाई सामान्यीकरणमै बसाइरहेको थिएँ, एउटा बिहे पार्टीमा भेट भएका अचिनारु मित्रले भने, “तपाईंलाई केमो र रेडिएसन दिएकै हो भने त्यो क्यान्सर नै थियो ।” आ ! क्यान्सर होस् कि पिनास होस्, मैले त्यसलाई जितिहालेँ भनेर म फुरुंगै भएँ ।
यत्तिका कारण मात्रै मैले ६० वर्षे अवकाश प्रणालीलाई स्वीकार गरेको होइन । म आफ्नो विगततिर र्फकंदा पाउँछु, २५ देखि ३५ वर्षको उमेरमा म २० घन्टासम्म नथाकी काम गर्थें । मैले भोगेको त्यो जीवन अहिलेका मानिसका लागि त कथै हुन्छन् । खाने भनेको जे पायो त्यही हो । म लेकाली गाउँमा काम गर्थें । खाने भनेको इस्कुस, मकै र आलु हुन्थे । र पनि थकाइ मानिँदैनथ्यो । यात्रा प्रायः रातकै हुन्थ्यो । दिनभरि आश्रयदाताको घरभित्र बन्दी हुनुपथ्र्यो । एकदमै अप्राकृतिक थियो, हाम्रो जीवनशैली । तर पनि हामी सबै नेता युवा थियौँ र हामी भन्ने गथ्र्यौं, ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन ।’
तर, प्राकृतिक शरीर त थाक्दो रहेछ । अहिले म सात घन्टा पनि काम गर्न सक्दिनँ । मैले एक दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता राजनीतिक मित्रहरू भेटेको छु, जसलाई खाना खाएपछि एकछिनका लागि भए पनि आँखाको बिट मार्नुपर्छ । लगातार बैठकमा बसिरहँदा खुट्टा झमझमाउँछन् । रुघाखोकी त तिनको पि्रय मित्र नै भइसकेको छ काठमाडौँमा । सबैका लागि ‘मर्निङ् वाक’ उपचारको विधि भएको छ ।
(स्रोत : कान्तिपुर – नेपाल साप्ताहिक अङ्क ५६०)